German kitchen midziyo
German kitchenware, German kitchenware, zvinhu zvinoshandiswa mukicheni cheGerman, midziyo yemagetsi yeGerman, midziyo yemumba yeGerman, midziyo yemagetsi yeGerman, zvekuchenesa zveGerman, zvekubika zveGerman, zvekuGerman tafura zvinhu, midziyo yekudyira yeGerman Ichi chinyorwa chakagadzirirwa nenhengo dzedu dzinokudzwa. uye haina kugadzirirwa nevarairidzi vedu veGerman.
Naizvozvo, panogona kuve nekushomeka. Yakave yakagadzirirwa ruzivo rwezvinangwa chete. Isu tinopa musoro wenyaya weGerman kitchenware yekushandisa kwako.
Shamwari dzinodiwa, nyaya yatichadzidzisa muchidzidzo chino ichave midziyo yekubikira neyekicheni, iyo zvakare ine nzvimbo yakakosha muhupenyu hwedu. ChiGerman Kitchenware (Geschirr) Iwe unenge waona nekudzidza zvakaenzana zveGerman zvemidziyo yemukicheni inonyanyo shandiswa mukicheni mushure mechidzidzo chatinozofukidza nenyaya yatichakurukura pasi pemusoro wenyaya.
ChiGerman Kitchenware (Geschirr) Chidzidzo chedu chakanzi zvakare chichava chinobatsira pakudzidza akawanda mazwi matsva ayo anoda kuti iwe ubate nemusoro. Muchidzidzo chino, unogona kufambira mberi zviri nyore kana iwe ukaverenga mazwi atakapa mutafura kana kana ukashanda nekusimudzira icho chinhu chiri mundangariro dzako kuitira kuti mazwi aunosangana nawo akwanise kuyeukwa nekurangarirwa zviri nyore.
German Kitchenware Zvinoreva muTurkey
der Microwellenherd → Microwave
der Elektroherd → Ovheni yemagetsi
der Herd → Hovhoni
der Backofen → Hovhoni
das Gasi → mweya
der Gasherd → Chitofu chegasi
der Toaster → Muchina wechigunwe
kufa Friteuse → Yakadzika fryer
die Tiefkuhltruhe → Yakadzika chando
die Geschirrspülmaschine → Dishwasher
das spülmittel → Dish sipo
das waschpulver → Dish upfu
das spültuch → Jira dhishi
der Topfhandschuh → Bata
der Putzlappen → Jira reguruva
der Lappen → Pasina
das geschirrtuch → Jira rekicheni
die Spüle → Kaunda
das Waschbecken → singi
der Abfalleimer → Tsvina
der Wasserkessel → Keturu
kufa teekanne → Keturu
die Küchenmaschine → Chisanganiso
der Musanganisi → Anorova
der Essloffel → Tapepoon
der Kaffeelöffel → Tea chipunu
kufa Tasse → mukombe
die Untertasse → Pasi peplate
kufa zuckerdose → Shuga mbiya
das besteck → Tafura
das Küchenmesser → Kicheni banga
das brett → Bread bhodhi
das Tafara → Tireyi
das Glas → mukombe
der Salzstreuer → Munyu
der Löffel → chipunu
kufa Gaberi → Forogo
das messer → Banga
kufa Burste → Brashi
der Dosenöffner → Inogona kuvhura
die Spülschüssel → Basin
kufa Teigrolle → rinopfungaira Pin
kufa schale → Bowl
die Suppenschussel → Supu mbiya
der Teller → fodya
kufa Pfanne → Pan
der Dampfkochtopf → Kumanikidza mubiki
das Set → Chikwata
das Milchkannchen → Mukaka muhari
Kana iwe uchida, ngatione iyo yeGerman kitchenware mune chinyorwa.
der Mikrowellenherd: microwave oven
der Elektroherd: magetsi evheni
der Gasherd: gas furnace
der Abfalleimer: trash
der Lappen: machira
der Putzlappen: guruva jira
der Dosenöffner: unogona kubuda
der Flaschenöffner: bottle opener
der Löffel: spoon
der Esslöffel: tablespoons
Der Waya: Plate
das Milchkannchen: mukaka ndiro
das Glas: makapu
das Geschirr: dish-dish
das Küchenmesser: kicheni kemikisi
das Messer: mucheche
Das Brett: Bhokisi rechingwa
Das Spülmittel: saga yakashambadza
das Geschirrtuch: shitini twidhi
das Spültuch: jira redha
das Staubtuch: guruva
das Gesi: gasi
kufa Küchenmaschine: musanganisi
die Tiefkühltruhe: deep freezer
kufa Geschirrspülmaschine: dishwasher
die Bürste: brush
die Spule: loom
die Spülschüssel: pelvis
die Pfanne: frying pan
die Friteuse: fryer
die Teigrolle: kupinza pini
die Gaberi: fokita
kufa Usingaiti: pasi peplate
kufa Mugomba: mukombe
die Suppenschüssel: soup ndiro
die Schale: dish
kufa Zuckerdose: shuga ndiro
German Power ToolsGerman magetsi midziyoGerman articlesGerman german itemsGerman kitchen kitchenGerman kitchen kitchenGerman kitchen kitchenGermanGerman kitchen kitchenGerman cleaning clean suppliesZvokudya zveGermany zvinoshandiswaGerman Dining Table Table ItemsGerman dining table